ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သို့ Jiang Nan International Co., မှ ကျန်းမာရေးအထောက်အကူပြု ပစ္စည်းများ လာရောက်လှူဒါန်း - ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ - Bago Regional Government
Home / တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့နှင့် ဌာနဆိုင်ရာများ / ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သို့ Jiang Nan International Co., မှ ကျန်းမာရေးအထောက်အကူပြု ပစ္စည်းများ လာရောက်လှူဒါန်း
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သို့ Jiang Nan International Co., မှ ကျန်းမာရေးအထောက်အကူပြု ပစ္စည်းများ လာရောက်လှူဒါန်း
April 30, 2020	တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့နှင့် ဌာနဆိုင်ရာများ, ပဲခူးမြို့နယ်, သတင်းမှတ်တမ်းများ 162 Views
ဧပြီ ၃၀ (ပဲခူး)
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ တော်ဝင်ဟံသာခန်းမသို့ ဧပြီလ(၃၀)ရက်နေ့၊ နံနက်(၁၀)နာရီအချိန်က ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်ရေး Jiang Nan International Co., မှ ကျန်းမာရေးအထောက်အကူပြု ပစ္စည်းများ လာရောက်လှူဒါန်းခဲ့သည်။
ရှေးဦးစွာ Jiang Nan International Co., MD. Mr Tu Guoding က ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း COVID-19 ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးလုပ်ငန်းများတွင် တစ်ဘက်တစ်လမ်းမှ အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ကျန်းမာရေးအထောက်အကူပြု ပစ္စည်းများအား လှူဒါန်းပေးရခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ တရုတ်နှင့် မြန်မာသည် ရှေးယခင်ကတည်းက ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်များဖြစ်ပြီး တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ စာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှု စသည်တို့ အမှီပြုနေထိုင်လျက်ရှိကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်အစိုးရအပိုင်းမှာလည်း တရုတ်နိုင်ငံမှ ဆေးပညာရှင်များ လာရောက်၍ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသလို ကျွန်တော်တို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကလည်း ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွက် သီးခြားလာရောက် ထောက်ပံ့ကူညီပေးရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့နောက် Jiang Nan International Co., ၊ မြန်မာ-ကျဲ့ကျန်းကုန်သည်ကြီးများအသင်း၊ မြန်မာ-တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုအသင်းတို့မှ တာဝန်ရှိသူများက PPE ဝတ်စုံ(၁၉၀)စုံ၊ Mask(၅၀၀၀၀)ခု၊ Infrared Thermometer (၁၀၀)ခုတို့အား ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သို့ ထောက်ပံ့လှူဒါန်းခဲ့ရာ၊ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဝင်းသိန်းမှ ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာ ပြန်လည်ပေးအပ်၍ ကျေးဇူးတင်စကား ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့သည်။
Jiang Nan International Co., ၊ မြန်မာ-ကျဲ့ကျန်းကုန်သည်ကြီးများအသင်း၊ မြန်မာ-တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုအသင်းတို့မှ ထောက်ပံ့လှူဒါန်းသည့် ကျန်းမာရေးအထောက်အကူပြု ပစ္စည်းများအား သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်များအလိုက် ခွဲဝေထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဧပြီလ(၁၀)ရက်နေ့က ပဲခူးဆေးရုံကြီးတွင် အသက်ရှုစက် ဝယ်ယူအသုံးပြုရန်အတွက် ကျပ်သိန်း(၁၀၀)အား ထောက်ပံ့လှူဒါန်းပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
အခမ်းအနားသို့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဝင်းသိန်းနှင့် ဝန်ကြီးများ၊ အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူးနှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ Jiang Nan International Co., MD. Mr Tu Guoding နှင့် မြန်မာ-ကျဲ့ကျန်းကုန်သည်ကြီးများအသင်း ဒါရိုက်တာများ ၊ မြန်မာ-တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုအသင်း Mrs. Meng Fei နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။